ILibreOffice 7.0 ngeke isavumela ukuthekelisa okuqukethwe kufomethi ye-swf | Kusuka kuLinux
ILibreOffice 7.0 ngeke isavumela ukuthekelisa okuqukethwe kufomethi ye-swf
Futhi singasho ukuthi bekungconoYize ubuchwepheshe buthembisa, babumele inkinga enkulu yezokuphepha kumawebhusayithi ohlangothini lweseva, ngaphezu kweqiniso lokuthi ohlangothini lweklayenti (nangejubane le-inthanethi yangaleso sikhathi), lalimele ukukhokhiswa okukhulu nokusetshenziswa kwezinsizakusebenza zenethiwekhi.
Eminyakeni eminingi ngemuva kokuthi abathuthukisi bewebhu baqale ukudala indinganiso ekusebenziseni iwebhusayithi kanye nokulethwa, fukuqhuma kwaqala ukunqanyulwa futhi ngokuhamba kwesikhathi kwavele kwadlula kokukhohlwayo, Ngaphezu kwalokho, okwesikhashana manje, bobabili abathuthukisi beziphequluli ezinkulu zewebhu kanye ne-Adobe uqobo banqume ukuqeda lobu buchwepheshe obususebenzisiwe.
Ubuchwepheshe I-Flash iye yehla iminyaka eyishumi ngenxa yezimbungulu nobuthakathaka ezokuphepha ezenze kwaba yisisulu esikhulu kubaduni.
Kusukela ngo-2010, isithunzi sakhe sithinteke kakhulu ngenxa yemibiko yokuhlaselwa okususelwa ekubeni sengozini ngaphakathi kuyo. Ukwenqaba kuka-Apple ukuthatha unyaka ofanayo bekungekhona ukusiza ukwakha kabusha i-aura yayo.
Ungakhohlwa kanjani ukucaphuna iGoogle, okuthi ngo-2016 iyeke ukuyivula ngokuzenzakalela kusiphequluli sayo se-Chrome. Kodwa-ke, i-Adobe iyaqhubeka nokukhipha izibuyekezo zanyanga zonke, noma ngabe ubuchwepheshe busetshenziswa kumawebhusayithi angaphansi kwama-5% namuhla noma inani labasebenzisi be-Intanethi abafinyelele kokuqukethwe kweFlash ngesiphequluli se-Chrome lehle lisuka ku-80%. ngo-2014 kuya ngaphansi kuka-8% ngo-2018.
Kuliqiniso, enkundleni, uFlash usendleleni eya emathuneni.
Kokuthunyelwe okwashicilelwa eminyakeni emi-2 eyedlule, umshicileli uyakuvuma lokhu futhi umemezela ukuthi ukuphela kokusekelwa kobuchwepheshe kuhlelwe ukuphela kwalo nyaka (2020).
“Abakwa-Adobe bacabanga ukuqeda ukwesekwa kweFlash. Ngokuqondile, sizoyeka ukubuyekeza nokusabalalisa iFlash Player ekupheleni kuka-2020 futhi sizokhuthaza abadali bokuqukethwe ukuthi bathuthele noma yikuphi okuqukethwe okukhona kweFlash kumafomethi amasha avulekile, "kubhala i-Adobe ngo-2017.
Futhi akukhona ukuthi iziphequluli zewebhu kuphela ezikhethe ukuqeda ukwesekwa kwalobu buchwepheshe, kepha nezinye izinhlelo ezinjenge- "LibreOffice" zijoyine le nhlangano.
I-Document Foundation isusa ukwesekwa kwe-swf ku-LibreOffice 7
La IDocument Foundation isivele iyayisebenzela y enguqulweni elandelayo yehhovisi suite "LibreOffice 7.0" kulindeleke ngasekupheleni konyaka, kuzoba uhlobo lapho isihlungi sokuthekelisa kufomethi yefayela le-Macromedia Flash (swf) sizosuswa.
Isihlungi sokuthumela i-Macromedia Flash sisusiwe njengoba iFlash Player izophela ekupheleni kuka-2020
Ngamanye amagama, ngokwenguqulo 7.0 yehhovisi lamahhovisi lamahhala, Ngeke kusakwazi ukukhipha imidwebo nezethulo kufayela le-swf. Ushintsho oluzayo lunentshisekelo ethile kubasebenzisi besoftware yokwethula amasudi amahhovisi amahhala eLibreOffice neOpenOffice "Impress".
Ngokusho kwabasebenzisi abanolwazi, ngokungabi khona kokukwazi ukuthekelisa okuqukethwe kufomethi yeFlash, hKukhulunyiwe ukuthi ifomethi enikezwa ku-PowerPoint iyasebenza ezimweni eziningi eziphumelele.
Ngaphandle kwalokho kungenzeka futhi ukusebenzisa i-S5 (Uhlelo olulula, olususelwa kumazinga wesilayidi) olususelwa ku-xHTML. Kulokhu, sihlala kwi-axis yokusebenzisa isiphequluli sewebhu ukufunda isethulo njengoba bekunjalo ngefomethi ye-swf.
Ekugcineni futhi singalindela ukuthi inguqulo elandelayo yeLibreOffice ifike nokuthuthuka okumbalwa kuzihlungi zokungenisa noma zokuthekelisa ku-PowerPoint.
Uma ufuna ukwazi kabanzi ngakho, ungaxhumana nohlu lwezinguquko ezilungiselelwe i-LibreOffice 7 Kulesi sixhumanisi esilandelayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Izaziso » ILibreOffice 7.0 ngeke isavumela ukuthekelisa okuqukethwe kufomethi ye-swf
I-Google ikhiphe ikhodi yomthombo ye-AI yayo "TAPAS"
Ephreli 2020: Okuhle, okubi nokuthakazelisa kweSoftware yamahhala